Steve Jobsရဲ့ဘဝတစ်သက်တာကို လွှမ်းမိုးခဲ့သော စာအုပ် ၉အုပ် - Thutazone
Written By နိုင်းနိုင်းစနေ
Steve Jobsသာ သက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ရင် ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ရက်နေ့မှာ သူအသက် ၆၃ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ အသက် ၆ဝမတိုင်ခင် သူသေဆုံးသွားခဲ့လို့ သူ့ဘဝတစ်သက်တာကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့စာအုပ် ၉အုပ်နဲ့ပဲ လူသားမျိုးနွှယ်နဲ့နည်းပညာလမ်းဆုံမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဒီမြင့်မြတ်သူကြီးကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတကြရအောင်….
(၁) King Lear (William Shakespeare)
Walter Isaacson ရေးတဲ့ “Steve Jobs” အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်မှာ ရေးသားထားတာက “အထက်တန်းရောက်တော့ ကျွန်တော် ဂီတတွေအများကြီး စနားထောင်ခဲ့တယ်၊ နည်းပညာပြင်ပစာအုပ်တွေ အများကြီးစဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှိတ်စပီးယား၊ ပလေတို…. King Lear စာအုပ်ကို ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တယ်”လို့ Jobsက စာရေးသူကိုပြောခဲ့ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
King Lear က ရှိတ်စပီးယားရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်ထဲက တစ်အုပ်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ မင်းစိုးမင်းညစ် ဘုရင်ကြီးဟာ အမွေခွဲရာကနေ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့အဖြစ်က အသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ Jobsကို သတိပြုစရာအချက်တွေ ရရှိခဲ့စေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Moby-Dick (Herman Melville)
“Steve Jobs” အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်မှာရေးသားထားတာက Jobsရဲ့တစ်သက်မှာ နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်အနက် Moby-Dickနဲ့ Dylan Thomas ရဲ့ကဗျာလည်း ပါဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်။
Moby-Dickစာအုပ်ထဲမှာ သူရဲကောင်းကပ္ပတိန် Ahabဟာ စာပေသမိုင်းမှာ စိတ်အားထက်သန်ဆုံး၊ ကြံ့ခိုင်သန်မာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲရဲချရဲသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Steve Jobsကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၃) The Poems of Dylan Thomas
ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ Jobsက သူအရမ်းနှစ်သက်တဲ့ Dylan Thomasရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်က “Do not go gentle into that good night” ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
(၄) Be Here Now (Baba Ram Dass)
၁၉၇၂ခုနှစ်မှာ Reed Collegeကို Jobs တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကောလိပ်က Oregonပြည်နယ် Portlandမြို့အရှေ့တောင်အရပ်မှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက၊ လွတ်လပ်တဲ့ အနုပညာကောလိပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ LSD ကို သူစစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကို သူအများအပြားဖတ်ခဲ့တယ်။ (LSD ကို ဝီကီမှာရှာကြည့်တော့ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးလို့ဆိုတယ်။ ဓာတုလက်နက်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့ တရားမဝင်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)
“Steve Jobs” အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်မှာရေးသားထားတာက “Jobs ဟာ စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေ သူ့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လွှမ်းမိုးနေခဲ့ပြီဆိုတာကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ သူအများဆုံးပြောဖြစ်တာက Baba Ram Dass ရဲ့ Be Here Now ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာက ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြမှုဖြစ်တယ်။ Jobs က “အဲဒီစာအုပ်က ကျွန်တော့်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်”လို့ ပြောခဲ့တယ်”။
(၅) Diet foraSmall Planet (Frances Moore Lappe)
Jobsက အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ရင် တော်တော်လေး စေ့စပ်တိကျမှုရှိသူဖြစ်တယ်။ သူက သက်သတ်လွတ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တာကလည်း သူတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ “Diet foraSmall Planet” စာအုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Jobs က သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ရေးသူ Walter Isaacsonကို “အဲဒီကစ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်တော်အသားမစားတော့ဘူးလို့ အဓိဌာန်ချခဲ့တယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
(၆) Mucusless Diet Healing System (Arnold Ehret)
Arnold Ehret ရဲ့ Mucusless Diet Healing Systemစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် Jobsဟာ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုအစွန်းရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ့အသားအရေ လိမော်ရောင်သန်းခဲ့တဲ့အထိ ရက်သတ္တပတ်တော်တော်ကြာကြာ မုန်လာဥနီချည်းပဲ သူစားခဲ့ဖူးတယ်။
စာဖတ်သူများလည်း အစားအသောက် အစွန်းမရောက်စေဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ မင်းသား Ashton Kutcher က Jobsရဲ့အတွေ့အကြုံအတိုင်း ခံစားသရုပ်ဆောင်ကြည့်ပြီး အသီးတွေပဲ (all-fruit diet) စားခဲ့လို့ ဆေးရုံရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
(၇) Autobiography ofaYogi (Paramahansa Yogananda)
Jobsရဲ့တစ်သက်တာမှာ စာအုပ်အများကြီးဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ ipadထဲမှာ Autobiography ofaYogi ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူ လူငယ်အရွယ်က ပထမဆုံးဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းနဲ့ စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယကို သူအလည်အပတ်သွားတုန်းက ဟိမဝန္တာတောင်ခြေအောက်က လူနေအိမ်တစ်အိမ်မှာ ဒီစာအုပ်ကိုသူတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ခရီးသွားတစ်ဦးက အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းဒီစာအုပ်ကို အဲဒီအိမ်မှာ ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကို Jobs ဖတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖတ်ဖြစ်အောင် သူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
(၈) Zen Mind, Beginner’s Mind (Shunryu Suzuki)
အိန္ဒိယကနေ အမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက် ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းကို Jobs ရူးရူးသွပ်သွပ် နှစ်သက်သွားခဲ့မိတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၁၉၇ဝခုနှစ်မှာ ဇင်ဘာသာက အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်ရီးဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကို စဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ Jobs က ဘုန်းကြီး Shunryu Suzukiရဲ့ သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် အင်္ဂလိပ်လို Shunryu Suzukiရေးသားတဲ့ Zen Mind, Beginner’s Mind ကို ဖတ်ရှုခဲ့တယ်။
“အဲဒီကစ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာက ကျွန်တော့်ကို အတော်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ ဂျပန်ပြည်ကိုသွားပြီး ကျွန်တော်တရားအားထုတ်မလို့ စိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်က ကျွန်တော့်ကို ဒီမှာ (ကယ်ရီးဖိုးနီးယား)မှာပဲ နေခိုင်းခဲ့ပါတယ်”လို့ သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ရေးသူ Walter Isaacsonကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
(၉) The Innovator’s Dilemma (Cleyton Christensen)
ပန်းသီးတံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွန်းလှန်နေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ဥပမာ– iPhoneမှာ ပန်းသီးရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ iPodရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်များများ ပါရှိခဲ့တယ်။ iPhone ကြောင့် iPod က ခေတ်မရှိတော့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဟောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ Jobs ရဲ့အမြင်က — ကိုယ့်အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခြင်းက ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ ခြေတစ်လှမ်းဖြစ်တယ်။ ဒါဟာလည်း ဟားဗတ်စီးပွားရေးကောလိပ်က ဆရာ Cleyton Christensenရဲ့ The Innovator’s Dilemmaကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတာက ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်အောင်မြင်မှုနဲ့ကိုယ်အဖျက်ဆီးခံကြရတယ်။ နည်းပညာနဲ့ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူက ရှေ့ကိုရောက်နှင့်နေကြပေမယ့် အဲဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ်မှာပဲ မွေ့လျော်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ပန်းသီးတံဆိပ်မှာမဖြစ်စေရဘူးလို့ Jobs ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပန်းသီးတံဆိပ်တွေဟာ Cloud computing technology ကို ဖက်တွယ်ရသလဲဆိုတာကို Jobs က အခုလို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီလိုအသွင်ပြောင်ခြင်းက အရမ်းအရေးပါပါတယ်။ The Innovator’s Dilemma စာအုပ်မှာ Cleyton Christensen ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီပစ္စည်းခေတ်မမီတော့ဘူးဆိုတာကို နောက်ဆုံးမှ သိတဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်နောက်မကျန်ခဲ့ချင်ပါဘူး။
MobileMeကို ကျွန်တော်အခမဲ့လုပ်မယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရိုးရှင်းစေမယ်။ North Carolinaမှာ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လိုအပ်နေတာနဲ့ တသားတည်းဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်ဝယ်ပိုက်ထားနိုင်ပါပြီ”
သူပြောခဲ့တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဆိုတာက iCouldပဲဖြစ်ပါတယ်။